Dagaal ka dhacay Gobolka Jubbada Hoose – Soomaali 24 Media Network
Posted on July 12, 2019 Leave a Comment on Dagaal ka dhacay Gobolka Jubbada Hoose
Kismaayo-soomaali24-Wararka naga soo gaaraya Gobolka Jubbada Hoose ayaa waxaa ay sheegayaan in deegaanka Kulbiyoow oo ku yaalla xadka hala qeybiya Soomaaliya iyo Kenya ee Gobolkaasi ay ku dagaalameen Ciidamada Jubbaland iyo Ururka Al-Shabaab.
Dagaalka ayaa yimid kadib markii Al-Shabaab ay weerarku qaadeen saldhig Ciidamada Jubbaland ku leeyihiin deegaanka Kulbiyoow,waxaana goobjoogayayaal ay sheegeen in dagaal culus uu halkaasi ka dhacay.
Al-Shabaab ayaa warar ay ku daabaceen Baraha ay ku leeyihiin Internet-ka ayaa waxaa ay sheegeen in weerarkaas ay ku dileen Saddex askari oo ka tirsanaa ciidamada Jubbaland,balse waxaan weli ka hadlin sheegashada Al-Shabaab saraakiisha Ciidamada Jubbaland.
← Dhimasho iyo Dhawac badan oo ka dhashay Qarax ka dhacay Dalka Liibiya.
Kheyre oo soo gaba gabeeyey Safarkii Gaalkacyo kuna wajahan Galgaduud →